Qormo jacayl Oo Muhiim U Ah Lamaanayaasha - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Qormo jacayl Oo Muhiim U Ah Lamaanayaasha
1- Jaceylku marku cusubyahay wa macyahay waxa kasii macaan badan markii si dhab ah loo jilayo.
2- jaceylku waa halxiraale, waxa furay soomali ahaan xuseen iyo muliyo, boodhari iyo hodan, qeys iyo leylo,
3- Jaceylku waa riyo dheer oo macaan badan, guurkuna waa -alarm clock- ganbaleelka kaaatoosiyo riyadaas macaanta badan.
4- Hadii ay jiraan dad ka walwalo oo ka taxadaro waxa aan ahay mid kamid ah, hadii uu jiro hal ruux oo kaliya oo kaa taxadaro ruuxaas waa aniga. Hadiise uu jirin ruux kaa daxadiro waa anigoo aduunka kunooleyn.
5- Waan qoslaa, wan ku jeclaadaa, wan rajeeyaa, wan iskudayaa. Waan ku dhaawacmaa, waan ku baahdaa, waan cabsadaa, waan kuu ilmeeyaa. Adne macaan intaas in aad ila wadaagto waan ogahay, wan kujeclahay.
6- Magacaaga waxa aan ku qoray daruurta, nasiib daro dabeylaha ayaa tirtirtay, hadane waxa aan ku qoray ciida hadana nasiib xumo biyaha roobkaa tirtiray. Lakin hada waxa aan ku dhex qoray xinjiraha wadnaha gudihiisa ah weligiisna meeshaas ayuu ku qornaanayaa.
7- Dadka qaar waxa ay furaan indhaheyga, dadna waxa ay furaan maskaxdeyda oo aqoon kusoo kordhiyaan, laakin adigu waxa aad furtay wadnaheyga oo aad jeceyl xad dhaaf ah ku soo kordhisay.
8- Jaceylku wa indha sarcaad, mararka sidaa darteed qaar lama arko indha sarcaadkaas, mararka qaar wa dhalanteed, dhalantedkii ayaana hada dunida soomaalida ku batay.
9- Jaceylku waa indhoole guurka ayaa u ah dhaqtarka indhoha fiiqa.
10- Malasocotaa aqristoow jaceylka iyo websiteka hoganka.com iney saami yihiin. Hadane xiriir soojireen ah Kadhaxeeyo.
Madaxweyne Xassan Sheikh oo ka hadlay Xukuumadda cusub lasoo dhisayo
Boqolkiiba 52 Xisbiga Jamhuuriga Ee Maraykanku Waxay Ka Cabsi Qabaan In Lagaga Shubto Doorashada Madaxweynaha Ee Sannadka 2017 Ka Dhacaysa Dalkaas